Ụlọ Mita Igbe Meter | Ndị na -emepụta igbe China Mita na ndị na -ebubata ya
Iji nye igbe SMC Single Phase Electric Electric Meter na Circuit Breaker
PG usoro mmegharị sekit na-agbanwe agbanwe ugbu a (gardy rccb, gardy elcb) dabara maka AC 50/60Hz, 230/400V circuit, na-egbochi ibubiga oke ókè, obere okirikiri wdg. .N'otu oge ahụ, oke ọkwa nke oke nchekwa nwere ike idozi.
Ezi ezi nkesa ọkụ eletrik.
Ọ dị mma imeghe ma mechie sekit ahụ.
Ọ nwere ọkwa nchekwa dị elu ma nwee ike iji anya gosipụta steeti conduction nke sekit. jiri
Ịnwere ike ịwụnye ihe mgbochi sekit, mita eletrik, wdg, enwere ike iji ya mee ihe n'ime ụlọ na n'èzí
Ụgwọ akwụgoro ụgwọ, otu ma ọ bụ atọ
Ọnụ ụzọ nwere ọkụ ịgụ mkpọchi, ụzọ mbata sekit
-Ndị otu 2 × 10 / 30a, 2 × 30 / 60A, 2x90a,
-Atọ atọ 4 × 10 / 30a, 4 × 30 / 60A, 4x100a.
Mgbidi etinyere mgbidi mita atọ akwụ ụgwọ ụgwọ ọkụ ọkụ